Bit By Bit - dhaqanka loo kuurgalo - 2.3.6 Sheeg la'aan
Xogta aan shaki ku jirin waxay ku xun tahay shey-baarista ka-baxsan, laakiin waxay noqon kartaa mid waxtar u leh isbarbardhigga-tusaalaha.
Qaar ka mid ah saynisyahanada bulshadu waxay caadeysteen inay la shaqeeyaan xogta ka imanaysa tijaabooyin aan rasmi ahayn oo ka soo jeeda dadka si fiican loo qeexay, sida dadka qaangaarka ah ee ku nool waddan gaar ah. Xogta noocan ah waxaa lagu magacaabaa xogta wakiillada sababta oo ah tusaalaha "u taagan" ayaa ah tirada dadweynaha. Qaar badan oo cilmi-baarayaal ah ayaa ku guuleysta xogta wakiillada, iyo qaar ka mid ah, xogta wakiilku waxay la mid yihiin sayniska adag halka xogta aan shukaansaneyn ay la mid tahay is-qabsiga. Marka ugu daran, qaar ka mid ah shakiyadaha ayaa u muuqda in ay rumaysan yihiin inaan waxba laga baran karin xogta aan xaqiiqda ahayn. Hadday run tahay, tani waxay u egtahay inay aad u xadideyso waxa laga barto ilaha xogta weyn sababta oo ah qaar badan oo ka mid ah maaha kuwo aan xaq ahayn. Nasiib wanaag, shaki-galayaashu waxay qayb ahaan ka mid yihiin kuwo sax ah. Waxaa jira hadafyo cilmi-baaris oo gaar ah oo aan loo baahnayn xogta aan xaqiiqada ahayn si fiican uma ahan, laakiin waxaa jira kuwo kale oo ay tahay inay dhab ahaantii faa'iido badan leedahay.
Si aan u fahanno farqiga u dhexeeya, aynu ka fekereyno halbeegga sayniska: Daraasadda John Snow ee daraasadda 1853-54 ee dillaaca ee London. Waqtigaas, dhakhaatiir badani waxay rumaysan yihiin in daacuunku uu sababay "hawo xun", laakiin Snow ayaa rumaysan in uu ahaa cudur la isqaadsiiyo, oo laga yaabo in uu ku faafo biyo nadiif ah oo la cabo. Si aad u tijaabiso fikradahan, Barafku wuxuu ka faa'iidaystay waxa aan hadda u yeernay tijaabin dabiici ah. Waxa uu barbar dhigey heerarka daacuunka ee qoysaska ay ka shaqeeyaan labo shirkadood oo kala duwan: Lambeth iyo Southwark & ​​Vauxhall. Shirkadahaasi waxay u adeegeen qoysas isku mid ah, laakiin waxay ku kala duwan yihiin hal hab oo muhiim ah: sannadkii 1849-dhawr sano ka hor intaysan bilaabin cudurrada faafa-Lambeth waxay ka furtay meel ay ka soo galaan tuubooyinka bullaacadaha ee London, halka Southwark iyo Vauxhall ay ka soo daateen tuubooyinkooda hoosta dheecaanka bulaacada. Marka barafka la barbar dhigo heerarka dhimashada ee daacuunka ee qoysaska ay bixiyaan labada shirkadood, wuxuu ogaaday in macaamiisha shirkadda Southwark & ​​Vauxhall-shirkada ay bixinaysay macaamiisha biyaha bullaacadaha ah-10 jeer ay u badan tahay inay u dhintaan daacuunka. Natiijadan waxay muujinaysaa caddayn cilmi-baaris oo xoog leh oo ku saabsan doodda Snow ee ku saabsan sababta daacuunka, inkastoo aysan ku salaysneyn muunad wakiil oo dadka London ku nool.
Xogta laga helay labadan shirkadood, si kastaba ha ahaatee, ma ahan mid ku haboon in laga jawaabo su'aal kale: maxay ahayd dillaaca daacuunka ee London mudadii uu cudurku dillaacay? Su'aashaas labaad, taas oo sidoo kale muhiim ah, waxay u fiicnaan lahayd in la helo tusaale tijaabo ah dadka ka yimaada London.
Sida shaqada Snow ka muuqato, waxaa jira su'aalo cilmi ah oo ku saabsan xogta aan shukaansaneyn ay noqon karto mid waxtar leh, waxaana jira kuwo kale oo aan u qalmin. Mid ka mid ah habka ugu haboon ee loo kala saaro labadan nooc ee su'aaluhu waa in su'aalaha qaarkood ay ku saabsan yihiin isbarbardhigga sambabada iyo qaar ka mid ah waxay ku saabsan yihiin tusaalooyinka dibadda. Kala duwanaanshahan waxaa lagu muujin karaa daraasad kale oo ku saabsan epidemiology: Daraasadda British Doctors Study, oo door muhiim ah ka qaadatay muujinta sigaar-cabbidda sababta kansarka. Daraasaddan, Richard Doll iyo A. Bradford Hill waxay raaceen qiyaastii 25,000 dhakhtar lab ah dhowr sano waxaana ay barbar-dhigeen heerka dhimashadooda ku salaysan xaddiga ay sigaar cabbeen markii daraasadu bilaabatay. Doll iyo Hill (1954) heleen xidhiidh xooggan oo soo-saara jawaab-celinta: dadka aadka u sigaarcabsan ayaa sigaar cabba, waxay u badan tahay inay u dhintaan kansarka sanbabada. Dabcan, waxay noqon kartaa mid aan ku qanacsaneyn in cudurada kansarka sambabada ee dhammaan dadka Britishka ah ee ku saleysan kooxdan takhaatiirta labka ah, laakiin isbarbardhigga sigaarka ayaa weli caddaynaya in sigaar-cabiddu keento kansarka sanbabada.
Hadda waxaan soo bandhigay farqiga u dhexeeya isbarbardhigga sambalaha iyo samaynta sheyga aan ka baxsaneyn, laba xirmo ayaa la socda. Ugu horreyn, waxaa jira su'aalo dabiici ah oo ku saabsan xaddiga xiriirka ku dhex jira tusaale ahaan dhakhaatiirta Britishka ah ee Britishka ah ayaa sidoo kale ku qaban doona muunad dheddig ah oo ah haween, dhakhtar British ah ama shaqaale warshad reer British ah ama shaqaale warshad jarmal ah ama kooxo kale oo badan. Su'aalahani waa mid xiiso leh oo muhiim ah, laakiin way ka duwan yihiin su'aalaha ku saabsan xaddiga aan ka koobi karno muunad ahaan dadweynaha. Tusaale ahaan, waxaad u maleyneysaa in aad ka shakisan tahay in xiriirka ka dhexeeya sigaar cabista iyo kansarka ee laga helay labka dhakhtar ee Britishka ay u badan tahay inay isku mid yihiin kooxaha kale. Awoodda aad u leedahay in aad sameysid qulqul-darradani kama iman karto xaqiiqda ah in dhakhtarrada reer ingiriisku ay yihiin muunad ka duwan dadwaynaha; halkii, waxay ka timaaddaa fahamka habka loo xiro sigaar-cabbidda iyo kansarka. Sidaa awgeed, guud ahaan muunad ka mid ah dadweynaha laga soo qaaday waa tirakoobka tirakoobka, laakiin su'aalaha ku saabsan gaadiidka qaabka laga helo hal koox oo koox kale ah ayaa ah arrin aan caadi ahayn (Pearl and Bareinboim 2014; Pearl 2015) .
Waqtigaan, shaki wuxuu tilmaamayaa in qaababka bulsheed ee intooda badan ay u badan tahay in la yareyn karo kooxaha oo dhan marka loo eego xidhiidhka ka dhexeeya sigaarka iyo kansarka. Oo aniguna waan aqbalayaa. Xaddiga ay tahay in aan ka filanno naqshadaha lagu qaadi karo gaadiidka waa ugu dambeyn su'aasha cilmi ahaaneed ee loo baahan yahay in la go'aamiyo iyadoo lagu saleynayo aragtida iyo caddaynta. Waa inaan si toos ah looga fikirin in sifooyinka ay noqdaan kuwo la qaadi karo, lakiin waa inaan loo maleyneynin inaysan noqon karin gaadiidka. Su'aalahan kooban ee ku saabsan gaadiidka ayaa kuu sheegi doona haddii aad daba socotey doodaha ku saabsan inta cilmi-baarayaasha ay ka baran karaan dabeecadda bini-aadamka iyagoo baranaya ardayda jaamacadaha (Sears 1986, [@henrich_most_2010] ) . Hase yeeshee, inkastoo doodahaasi, ay tahay mid aan macquul ahayn in la yiraahdo cilmi-baarayaashu waxba kama baran karaan wax barashada ardayda jaamacadaha.
Wareejinta labaad waxay tahay in cilmi-baarayaasha badankood ee aan xog-ururinta lahayn aysan ka taxadarin sida Baraf ama Doll iyo Hill. Sidaa darteed, si aan u sharaxno waxa qaldani kara marka cilmi-baarayaashu isku dayayaan in ay sameeyaan dib-u-sameynta xog-siinta aan ka muuqanin, waxaan jeclaan lahaa inaan kuu sheego daraasad ku saabsan doorashadii baarlamaanka 2009 ee jarmalka by Andranik Tumasjan iyo asxaabtey (2010) . Iyada oo la falanqeynayo in ka badan 100,000 tweets, waxay ogaadeen in qeybta tweets ee xisbiyada siyaasadeed ay ka dhigan tahay saamiga codadka ay heshay doorashadii baarlamaanka (shaxda 2.3). Si kale haddii loo dhigo, waxay u muuqatay in xogta Twitter, oo asal ahaantii bilaash ah, ay beddeli karto sahanka dhaqanka dadweynaha, taas oo qaali ah sababtoo ah waxay xooga saarayaan xogta wakiillada.
Marka la eego waxa laga yaabo inaad hore u ogaato wax ku saabsan Twitter, waa inaad isla markiiba ka shakisataa natiijadan. Jarmalka oo Twitter ah sanadkii 2009 ma ahayn muunad ka duwan kuwii loo doortay Jarmalka, taageerayaasha qaybaha qaarkood waxay ku badin karaan siyaasadda inta badan taageerayaasha kooxaha kale. Sidaa darteed, waxay u muuqataa mid la yaab leh in dhammaan khilaafaadka suurtagalka ah ee aad qiyaasi kartid in lagaa joojiyo si ay xogtan u noqon lahayd si toos ah uga tarjumeysa codbixiyayaasha jarmalka. Dhab ahaantii, natiijooyinka Tumasjan et al. (2010) u muuqday mid aad u wanaagsan inuu noqdo mid run ah. Andreas Jungherr, Pascal Jürgens iyo Harald Schoen (2012) ayaa sheegay in falanqaynta rasmiga ah ay ka baxday xisbigii siyaasadeed ee dhab ahaantii ku helay bogga ugu badan ee Twitter: Xisbiyada Pirate, qayb yar oo ka dagaallamaya xeerka dawladda internetka. Marka lafiirtanka burcad-badeedda lagu daro falanqaynta, Twitter ayaa sheegaysa in uu noqonayo saadaashii naxdin leh ee natiijooyinka doorashada (shaxda 2.3). Sida tusaalahan muujinaya, iyadoo la adeegsanayo ilaha xogta aan weyneyn ee laga helo maadooyinka ka soo baxa shay-baarka ayaa aad u khaldami kara. Sidoo kale, waa inaad ogaataa in xaqiiqda ah in ay jiraan 100,000 tweets in ay asal ahaan aan ku haboonayn: tiro badan oo aan xogta aan xaqiiqa ahayn weli wali wakiil ah, mawduuc aan ku soo laabanayo cutubka 3 marka aan ka wada hadlo sahanka.
Jaantus 2.3: Twitter ayaa u muuqata in ay saadaalisay natiijada doorashadii 2009 ee Jarmalka (Tumasjan et al. 2010) , laakiin tani waxay ka reebaysaa xisbiyada badanaa soo jeediyay: Xisbiyada Pirate (Jungherr, Jürgens, and Schoen 2012) . Eeg Tumasjan et al. (2012) si ay uga doodaan in laga saaro Xisbigii Pirate. Waxaa laga soo qaatay Tumasjan et al. (2010) , miiska 4 iyo Jungherr, Jürgens, and Schoen (2012) , miiska 2.
Si loo soo gabagabeeyo, ilo xogeedyo badan oo waawayn ah maaha shay-yada wakiil ka ah dadwaynaha qeexan. Su'aalaha u baahan natiijooyinka guud ee laga soo qaaday muunada si ay dadku uga soo baxaan, tanina waa dhibaato culus. Laakiin su'aalaha ku saabsan isbarbardhigga tusaalaha, xogta aan shukaansaneyn waxay noqon kartaa mid xoogan, illaa inta cilmi-baarayaashu ay cad yihiin sifooyinka tusaalahooda iyo taageerada codsiyada ee ku saabsan gaadiidka oo leh caddayn diineed ama amiir ah. Dhab ahaantii, rajadaydu waxay tahay in ilaha xogta waaweyni ay u suurtageli doonaan in cilmi-baarayaashu ay sameeyaan isbarbardhig ka dhexjiraan kooxo aan tiro lahayn, waxaana maleynayaa in qiyaasta kooxo badan oo kala duwan ay kordhin doonaan cilmi-baarista bulshada marka loo eego hal qiyaas oo ka duwan saamiga.